समय बर्बाद गर्नबाट रोक्नुहोस् र तपाईंको परिवारलाई बचाउनको लागि अब एक भोज तयार गर्नुहोस् - कानून फर्म दुबई
समय बर्बाद गर्न रोक्नुहोस् र आफ्नो परिवारलाई बचाउनको लागि अब एक विल बनाउनुहोस्
तपाईंको लाभार्थीहरू छान्नुहोस्।
तपाईको जीवनमा तपाईले बनाउनु हुने सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कागजात मध्ये एक इच्छाशक्ति हो। वर्षौंदेखि कडा परिश्रम गरिसकेपछि, सम्पत्तिहरू जम्मा गर्दा, तपाईं आफ्ना प्रियजनहरूलाई यी चीजहरूको नियन्त्रण गर्न र तपाईंलाई गएको बखत राम्रो जीवन दिन चाहानुहुन्छ।
वित्तीय बोझ र तनाव कम गर्दछ
युएई सम्पत्तिहरूको लागि विल्स
A यो पूरा गर्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाईंले आफ्नो इच्छा लेख्न सोच्नुभएको छैन भने, त्यसोभए यो सल्लाह दिइन्छ कि तपाईले वकिलसँग कुराकानी शुरु गर्नु भन्दा पहिले नै एउटा ड्राफ्ट बनाउने बारेमा कुरा गर्न थाल्नुहोस्।
विल्स के हो?
A ले निर्धारण गर्दछ कसरी मालिकको मृत्युमा सम्पत्तिहरू वितरण गरिने छ, किनकि यसले परिवारमा आर्थिक बोझ र तनाव कम गर्दछ। तपाईंले यो निश्चित गर्नुपर्दछ कि तपाईंको इच्छा मान्य छ अन्यथा यसले कुनै असर पार्ने छैन, र तपाईंलाई अन्तराष्ट्रिय मृत्यु भएको मानिनेछ। पूर्ण ईस्टेट योजना प्रक्रियाको एक हिस्सा मात्र एक इच्छा हो।
तपाईको इच्छामा कुन सम्पत्ति समावेश गर्ने निर्णय गर्नुहोस्। कसले तपाईंको सम्पत्ती अधिकार पाउनेछ निर्णय गर्नुहोस्। तपाईंको सम्पत्ती ह्यान्डल गर्न एक प्रशासक छान्नुहोस्। तपाईंको बच्चाहरूको लागि अभिभावक छनौट गर्नुहोस्।
मलाई किन इच्छा चाहिन्छ?
तपाईंको सम्पत्ति योजनाको अन्तिम अंश तपाईंको इच्छा हो, र त्यहाँ तीन कारणहरू छन् किन तपाईंसँग पूर्ण र अप टु डेट ड्राफ्ट हुनुपर्दछ।
सर्वप्रथम, तपाईंको इच्छाशक्ति एक उपकरण हो जसले अरूलाई तपाईं कसरी तपाईंको सम्पत्ति मृत्युमा वितरित गर्न चाहनुहुन्छ भनेर बताउँछ। यदि एक अवस्थित अवस्थित छैन भने, तपाइँको सम्पत्ति वैधानिक सूत्र अनुसार वितरण गरिएको छ, तपाईको अभिव्यक्त इच्छा अनुसार भन्दा। ग्यारेन्टी गर्नको लागि कि तपाईंले दिमागमा राख्नु भएको व्यक्ति वा संस्थाले तपाईंले उनीहरूका लागि बाँचेका सम्पत्तिहरू प्राप्त गर्नुहोस्, तपाईंलाई एक वकिलको मद्दत चाहिन्छ ताकि तपाईंको घर जग्गा सजिलोसँग तपाईंको चाहानु हुने ढ easily्गले संरचना हुन्छ।
यो एक इच्छा हुनु महत्त्वपूर्ण छ ताकि तपाईंको नजिकका मान्छेहरूले तपाईं कसरी तपाईंको इच्छा पूरा गर्न चाहनुहुन्छ भनेर बुझ्न सकून्। एक इच्छा संग, तपाईं सम्पत्ति वितरण को बारे मा स्पष्ट दिशानिर्देश दिनुहुन्छ, पहिले नै धेरै गाह्रो छ कि एक पटक मा तनाव र भ्रम कम।
अन्तमा, एक वैध इच्छाले तपाईंको परिवारमा आर्थिक भार धेरै कम भएको सुनिश्चित गर्दछ। जहाँसम्म, यदि मृत्युमा वैध इच्छाशक्ति छैन भने, आंत्रा कानूनहरू लागू हुनेछन्। यसको मतलब के हो भने सम्पत्ति वैधानिक सूत्र अनुसार वितरण हुनेछ, माथि उल्लेख गरिए अनुसार। तपाईंको परिवारको लागि, यो वैध इच्छाशक्तिको तुलनामा कागजातहरू तयार गर्ने र आन्तरिक सम्पत्ति प्रशासनको लागि कानुनी आवश्यकताहरू पूरा गर्न जटिल हुन सक्छ, जसले तपाईंको परिवारमा थप वित्तीय लागत र बोझ बढाउँदछ।
युएई अदालतहरूले शरिया कानूनको पालना गर्नेछन्
युएईमा सम्पत्ति भएका व्यक्तिको लागि ईच्छा गर्नुको एक सरल कारण छ। दुबई सरकारको आधिकारिक वेबसाइटले भनेका छन कि 'युएई अदालतले कुनै पनि हालतमा इच्छा नभएमा शरिया कानूनको पालना गर्नेछ'।
यसको मतलब यदि तपाईं मर्जी वा तपाईंको इस्टेटको योजना बिना नै मर्नुभयो भने, स्थानीय अदालतहरूले तपाईंको सम्पत्ति जाँच गर्नेछ र शरिया कानून बमोजिम वितरण गर्दछ। जबकि यो राम्रो लाग्न सक्छ, यसको प्रभाव यति नहुन सक्छ। बैंक खाताहरू सहित मृतका सबै व्यक्तिगत सम्पत्तिहरू स्थिर गरिनेछ जबसम्म देयता डिस्चार्ज हुँदैन।
बच्चा भएका श्रीमती एस्टेटको १/ 1th भाग मात्रका लागि योग्य हुनेछन्, र एक इच्छा बिना यो वितरण स्वचालित रूपमा लागू हुनेछ। स्थानीय अदालतले उत्तराधिकारको मुद्दा निर्धारण नगरेसम्म साझा सम्पत्ति पनि स्थिर गरिनेछ। अन्य क्षेत्राधिकार जस्तो नभई युएईले 'बाँच्न पाउने अधिकार' (अर्को व्यक्तिको मृत्युपछि बचेका संयुक्त मालिकलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्पत्ति) अभ्यास गर्दैन।
यसबाहेक जहाँ व्यवसाय मालिकहरू चिन्तित छन्, यो फ्रि जोन वा एलएलसीमा होस्, सेयरधारक वा निर्देशकको मृत्यु भएको खण्डमा, स्थानीय प्रोबेट कानून लागू हुन्छ र सेयरहरू बचेरबाट स्वचालित रूपमा पास हुँदैनन् न त परिवारका कुनै सदस्यले बदली लिन सक्छन्। शोक सन्तप्त बालबालिकाको अभिभावकत्वको बारेमा पनि मुद्दाहरू छन्।
तपाईको सम्पत्ति र बच्चाहरूको सुरक्षाको लागि विवेकी हुनु बुद्धिमानी हो र ती सबको लागि आज तयार रहनुहोस् जुन भोलि हुन सक्छ र हुन सक्छ।
मृत्यु पछि इच्छा छैन जब के हुन्छ?
यदि एक व्यक्ति इच्छा सिर्जना नगरी मर्दछ भने, तिनीहरू आंत्राको रूपमा चिनिन्छन्, र तिनीहरूको सम्पत्ति राज्यको कानून द्वारा व्यवस्थित हुनेछ कि कुन उत्तराधिकार कोमा जान्छ भनेर रूपरेखा बनाउँछ। त्यहाँ एक मृतकको लागि सम्पत्ति हस्तान्तरणको कानूनी प्रक्रिया छ सहि उत्तराधिकारीलाई प्रोबेट भनिन्छ।
कुनै पनि अपराधीको नामाकरण गरिएको छैन, त्यस प्रशासकलाई त्यो क्षमतामा सेवा गर्न न्यायाधीशले नियुक्त गरेको हुन्छ। यदि एक इच्छा अवैध मानिएको छ भने, एक प्रशासकको नाम हुनुपर्दछ। कानूनी रूपमा वैध हुनको लागि, तिनीहरू केहि मापदण्डहरू पूरा गर्नै पर्छ। यद्यपि आवश्यकताहरू राज्य अनुसार फरक फरक हुन्छन्।
एक प्रशासक प्रायः अपरिचित हुन्छ, र जो कोही उनी वा त्यो हुन सक्छ, तिनीहरू तपाईको राज्यको प्रोबेट कानून द्वारा बाध्य हुनेछन्। त्यसकारण, प्रशासकले निर्णयहरू लिन सक्दछ जुन तपाईंको इच्छा वा तपाईंको उत्तराधिकारीको इच्छाको लागि आवश्यक छैन।
के मैले मेरो जीवनसाथीसँग संयुक्त इच्छा राख्नु पर्छ वा हाम्रो छुट्टै विलहरू छ?
धेरै जसो इस्टेट योजनाकारहरूले संयुक्त इच्छाहरूलाई सल्लाह दिदैनन्, र केहि राज्यहरूमा उनीहरू मान्यता प्राप्त हुँदैनन्। नमिल्दो कुरा तपाईं हो, तपाईंको पति / पत्नी एकै समयमा मर्ने छैनन्, र त्यहाँ सम्पतिहरू हुन सक्छन् जुन संयुक्त रूपमा आयोजित गरिएको छैन। त्यसोभए एक छुट्टै इच्छाले अर्थ राख्दछ, तपाईंको इच्छा र तपाईंको जीवनसाथीको पनि यस्तै देखिन्छ।
विशेष रूपमा, छुट्टै इच्छाशक्तिले प्रत्येक पति वा पत्नीलाई पूर्व-पति या पत्नीहरू र पछिल्लो सम्बन्धबाट बच्चाहरू जस्ता मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्न अनुमति दिन्छ। यो अघिल्लो विवाहबाट प्राप्त भएको सम्पत्तीको लागि समान हो। कसलाई के हुन्छ भन्ने बारे तपाइँ स्पष्ट हुनुपर्दछ। यद्यपि, प्रोबेट कानूनहरू प्रायः हालका पति / पत्नीको पक्षमा छन्।
एक लाभदाता के हो?
वसीयतमा लाभान्वितहरू ती नामित व्यक्ति वा परोपकारीहरू हुन् जसले मृतकको सम्पत्ति वा सम्पत्ति पाउनेछन्। यो ले पहिचान र परिभाषित हितग्राहीहरू को हुन् र उनीहरूलाई के उत्तराधिकार प्राप्त गर्ने परिभाषित गर्दछ।
एक लाभदाता सचेत हुनुपर्दछ कि तिनीहरू एक वसीयतमा लाभार्थीका रूपमा नामाकरण गरिएको छ, साथै उनीहरूलाई तोकिएको पूरा सम्पदामा। यद्यपि, उपभोक्ताले सफलतापूर्वक लाभार्थीमा हस्तान्तरण सम्पत्तिको प्रोबेट र स्वामित्वको लागि आवेदन गरे पछि लाभार्थीले प्राप्त गर्न, मूल्या ,्कन गर्न वा तिनीहरूको सम्पदा हेर्न सक्दछन्।
एक कार्यकारी (एक्जिक्युट्रिक्स) को हो?
एक कार्यवाहक भनेको त्यस्तो व्यक्ति हो जसले सम्पूर्ण प्रशासकीय कर्तव्य र कार्यहरू सम्हाल्ने मान्छेको ईच्छा अनुसारको इच्छा अनुसार हुन्छ। यस व्यक्तिले टेस्टेटरको मृत्युमा सम्पत्तीलाई क्रमबद्ध गर्दछ, कुनै पनि उत्तराधिकार कर तिर्दछ, र प्रोबेटको लागि आवेदन दिन्छ। तपाईको इच्छामा चार भन्दा माथि कार्यकारी हुनसक्दछन्, र तिनीहरू पनि इच्छापत्रको हकवाला हुन सक्छन्।
यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं एक विश्वासिदारलाई एक कार्यकारीका रूपमा नियुक्ति गर्नुहुन्छ किनभने तिनीहरू इच्छापत्रमा विस्तृत रूपमा निर्देशनहरू पालना गर्छन्। एकचोटि तपाईंले एक कार्यकारीकर्तामा निर्णय गर्नुभयो, तपाईंले तिनीहरूको पूरा नाम र ठेगाना तपाईंको इच्छामा रेकर्ड गर्नुहुनेछ। कार्यवाहक राख्नुपर्दछ र सम्पर्क गर्नु पर्दछ जब उनीहरूलाई आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न आवश्यक हुन्छ।
कति पटक इच्छा अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ?
यस्तो सम्भावना छ कि तपाईंले आफ्नो इच्छालाई कहिल्यै अपडेट गर्नुपर्दैन, वा तपाईं नियमित आधारमा अपडेट गर्न रोज्न सक्नुहुन्छ। यो निर्णय पूर्ण रूपमा तपाईमा निर्भर गर्दछ। तथापि, याद गर्नुहोस्, तपाईंको इच्छाको एकमात्र संस्करण मृत्युको समयमा अस्तित्वमा रहेको सबैभन्दा हालको मान्य मान्य हो।
दिमागमा यो साथ, तपाई आफ्नो इच्छा पुन: भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ कहिलेकाँही प्रमुख जीवन परिवर्तन हुन्छन्। यसमा मूल पलहरू जस्तै सम्बन्ध विच्छेद, बच्चाको जन्म, एक हितधारक वा कार्यवाहकको मृत्युमा, महत्त्वपूर्ण खरीद वा पैतृकत्व, र यस्तै समावेश छन्। साथै, जब तपाईंको बच्चाहरू वयस्क हुन्छन्, अभिलाषामा अभिभावकहरूको नाम राख्नु कुनै अर्थ राख्दैन, यद्यपि अभिभावकहरूलाई अक्षम आश्रितहरूका लागि नाम दिन सकिन्छ।
मेरो इच्छासँग प्रतिस्पर्धा गर्न कसलाई अधिकार छ?
ईच्छाको प्रतिस्पर्धाको अर्थ कानूनी वा कागजातको सबै वा भागहरूलाई चुनौती दिनु हो। एक हितग्राही जो इच्छा शर्तहरू द्वारा अलिअलि महसुस यो प्रतिस्पर्धा गर्न रोज्न सक्छ। यो जीवनसाथी, वा पूर्व पति / पत्नी, वा बच्चाको लागि हो जुन बताइएको इच्छालाई विश्वास गर्दछ स्थानीय प्रोबेट कानूनको बिरूद्ध जान्छ।
एक अलग कारणका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ:
यदि यो राम्रोसँग गवाही दिइएको थिएन।
यदि तपाईं सक्षम हुनुहुन्न यसलाई हस्ताक्षर गर्दा।
वा जबरजस्ती वा ठगीको कारण हस्ताक्षर गरिएको।
न्यायाधीश उही हो जसले विवाद सुल्झाउनेछ। सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धाको लागि कुञ्जी यो हो जब त्यहाँ कानुनी मान्यताहरू पाइन्छ। सबै भन्दा राम्रो रक्षा, तथापि, एक स्पष्ट मस्यौदा र वैध कार्यान्वयन इच्छा हो।
कानुनी रूपमा बाध्यकारी ईच्छाका साथ आफ्ना प्रियजनहरूलाई रक्षा गर्नुहोस्।
तपाइँका बच्चाहरूको लागि अभिभावक छान्नुहोस्।